Soo Iibso URI + Yaree Nidaamka Urogenital / Uric Acid & Urethritis / Nephritis & Waxay Caawisaa Nidaamka Difaaca - Rar Bilaash & Canshuur La'aan | WoopShop®
URI + Yaree Nidaamka Urogenital / Uric Acid & Urethritis / Nephritis & Waxay Caawisaa Nidaamka Difaaca
URI + Yaree Nidaamka Urogenital / Uric Acid & Urethritis / Nephritis & Waxay Caawisaa Nidaamka Difaaca gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Magaca Summada: VITALSI
Kaabayaasha 'Agar-agar'. Ku habboon vegans: 90 kaabsol 500mg
Dhir isku dhafan: 100% dabiici ah
Waxay ka caawisaa joojinta koritaanka qanjirka 'prostate'
Waxay yareysaa nidaamka urogenital
Waxay yareysaa aashitada uric
Desinflamante iyo durayo.
Maxay Uri + uga timid Vitalsi:
Kordhinta Uri + ee loo yaqaan 'vitalsi', waa isku dar geedo, oo ka kooban caleen Achiote ah, caleemo faras, caleen dhir, caleen saqaf ah, iyo miro toon ah. Dhammaan qeybaheeda waxay doorbidaan habsami u socodka nidaamka difaaca jirka, waxay u dhaqmaan sidii diuretics dabiici ah. Waxay ka caawisaa yareynta xaaladaha kala duwan ee xubnaha taranka, sida cystitis, kaadi mareenka, iyo nephritis.
Achiote waxaa loo tixgeliyaa inay tahay isha muhiimka ah ee fiitamiin A iyo carotenoids kuwaas oo gacan ka geysta nidaaminta heerarka sonkorta ee dhiigga, iyo sidoo kale in la baabi'iyo oo la bogsiiyo. Waxay ka kooban tahay kalsiyum, kaas oo ka caawiya hagaajinta caafimaadka lafaha iyo sidoo kale folate.
Farasku wuxuu u shaqeeyaa sidii durayo xoog badan oo xallin kara. Waxaa la tilmaamay inay u roon tahay sii deynta kaadida iyo ka saarista sunta ee beerka iyo kilyaha. Waxaa loo isticmaalaa in looga hortago haynta dareeraha. Sababta oo ah maadada sare ee ku jirta cusbada macdanta iyo fitamiinada, cirifka ayaa lagula talinayaa inuu yahay isbahaysi dabiici ah oo lagu daaweeyo daciifnimada, xaaladaha khafiifka ah ee dhiig yarida, sida taageerada da'da weyn, iyo xilliyada kala-goynta.
Parsley wuxuu noo keenaa macdano sida fosfooraska, kaalshiyamka, birta, iyo baaruudda, wuxuu kaloo siiyaa tiro badan oo fiitamiin C iyo beta-carotene, oo aad muhiim u ah
Weyn, si dhakhso leh u gaarsiin sida lagu sharxay, kuna faraxsan iibsashadayda
Waad ku mahadsan tahay, sida lagu sharaxay